Efa-bolana sisa : tsy mbola mihatra ny fandovana tany | NewsMada
Efa-bolana sisa : tsy mbola mihatra ny fandovana tany
Nambaran’ny filoham-pirenena ampahibemaso nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona ny janoary 2015 teo, teny Iavoloha, fa maimaimpoana ny fikarakarana ny fandovana tany, mandritra ny enim-bolana (janoary –jona 2015). Lasa ny roa volana efa-bolana sisa, saingy tsy afaka tanterahina, ity fepetra ity, satria tsy mbola nivoaka avy any amin’ny filankevitry ny minisitra ny didy fampiharana azy.
Manontany tena ny vahoaka sy ny voakasik’izany satria nolazaina fa anisan’ny fanamorana ny famindran-tompo amin’ny mpandova ity resaka fananan-tany ity. Tsy misy ny fanazavana ny antony tsy amoahana ny didy, nefa azo inoana fa tsy maintsy na tokony nisy ny fifampidinihana tamin’ny teknisianina ao amin’ny fananan-tany matoa nambara ampahibemaso.
Araka ny loharanom-baovao avy eny amin’ny fananan-tany, anisan’ny antontan-taratasy maro be mpangataka indrindra ny famindrana lova amin’ny taranaka. Raha ny fanazavana mikasika ity fandovana ity, tsy voakasik’ilay fepetra ny fizarana fananana.